Ụbọchị My Pet » Romance, A chere ma ọ bụ ihe Anyị Na-eme?
emelitere ikpeazụ: Oct. 21 2020 | 3 min agụ
Ọ bụrụ na i lee okwu ahụ 'romance' na akwụkwọ ọkọwa okwu ọ na-edepụtara dị ka ma a aha na a na ngwaa! Ya mere, ihe kpọmkwem bụ romance?
M pụrụ icheta azụ a mgbe m na-eji n'ezie ọgụ na mgba ndọrọ mmekọahụ mmekọrịta, M bụ na a akpan akpan bụbu na anyị nọ na-agbalị 'ịzọpụta' anyị na-anwụ anwụ mmekọrịta, n'ihi ya, anyị kpebiri na anyị ga-enwe 'ụbọchị abalị' n'izu ọ bụla. E nwere ihe dị njọ na nke na echiche, N'eziokwu nwere a kwa izu 'ụbọchị abalị' bụ ihe m na-arụsi ọrụ ike ume m ahịa ime, Otú ọ dị ihe m na-echeta banyere nke a karịsịa mmekọrịta bụ na ọ dịghị ihe o otú ọtụtụ ụbọchị ndị ahụ anyị wee na-, na romance mgbe wee azụ! Mmetụta anyị gbanwere. N'ihi ya, ọ mere nnọọ ihe ọ bụla dị iche ihe mere mgbe otú mgbe anyị nọdụrụ gafee table n'ebe onye ọ bụla ọzọ a na ihunanya ọnọdụ, enwere ka ọ dịghị romance anyị na nke a karịsịa ọnọdụ.
Ya mere, a na-egosi na ị na-apụghị ịmanye romance.
Ọ na-egosi na i nwere ike ime ihe ọnụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu dị ka 'ihunanya', Otú ọ dị ma ọ bụrụ na obi na-akpata omume na-adịghị n'ebe ọ n'ezie na-adịghị nnọọ ihunanya mgbe nile, N'ezie ọ pụrụ inwe mmetụta dị ka Anam Udeme ezé. Ọ dịtụwo mgbe ị nọdụ na onye ị na-akpa ihe a nri si na ya dị nnọọ echeghị nri? Mkparịta ụka stunted na ihere, ma ọ bụ ikekwe e nwere erughị ala na ihe ọjọọ mmetụta na ikuku. Mgbe nke a bụ ikpe ọ dịghị mkpa otú ihunanya ọnọdụ ma ọ bụ ọrụ ị na-eme, ọ dị nnọọ adịghị tụnyere ruo 'romance'. Na flipside m nwere ike na-eche na nke mgbe m mere ihe na onye na dị nnọọ ndị ndọrọ mmekọahụ mgbe niile, dị ka na-eje ije site na apịtị anyị wellies na mmiri ozuzo, ma ọ ka na- chere ihunanya, n'ihi na nke mmetụta na njikọ m na-akọrọ onye ahụ.
Olee banyere ndị di na nwunye ndị ị na-ahụ si ọnụ na o doro anya na nwere esemokwu - otú ihunanya ha ga mgbede na-? Ikekwe, ọ nwere ike na-azọpụta, ma ọ bụrụ na otu onye n'ime ha mere ihe ihunanya na mebiri na ice na triggered ịhụnanya mmetụta ọzọ. N'ezie adịghị ha na-ekwu na anam-elu mmekọahụ nwere ike ịbụ na-ekpo ọkụ? (N'ihi na m na ndị inyom ahịa M nwere ike ikwu na-aga maka mmekọrịta ebe ịhụnanya na ahuhu bụ na-agbanwe agbanwe, kama na-ekpo ọkụ na oyi).
Dị ka nwaanyị na m mere ka ọ mata eziokwu ahụ bụ na mgbe mmadụ na-aga a ogologo ụzọ na- nke ihe ihunanya ya nwaanyị ọ na-kpọrọ ihe nke ukwuu, ọbụna ma ọ bụrụ ikekwe sị nwaanyị naanị akpa kwuru nwoke, na ọ bụghị n'aka ya ma, Ndị na-ekwu okwu anyị ndị inyom ịghọta ihunanya mmegharị. Otú ọ dị ọbụna nke a dịruru ná njọ na-ahụ n'elu, achọghị ihunanya ogbugbu nwere ike iru ala kwa, Ya mere, ebe bụ akara?
Gịnị ka romance pụtara nye gị? Ọ kwesịrị ekwesị nile n'ọnọdụ ma ọ bụghị ihe mere bụghị? Nwere ike ọ ga-eji na-agwọ ma na-arụzi a mmekọrịta ma ọ bụ iji edita ịhụnanya na ahuhu? Ndị a bụ ndị na-akpali ajụjụ ịjụ.
Ọ bụ maa esemokwu nke abụọ n'akụkụ. Onwe m na-egosi na romance bụ a mmetụta, nke nwere ike na-ada na site na ihe emereme ma ọ bụ na usoro nke omume. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na di m na-ezube a mma ụbọchị anyị, na-aga mgbalị iji m, ma ọ bụ ọ na-egosi n'ụlọ na a nnukwu ụyọkọ okooko osisi m, a ga-ịkpalite a ihunanya omume n'ime m. M ga-eche na a ụfọdụ ụzọ na m ga-eso na ya. M ga-enwe ekele maka ihe o mere ma ọ ga-eme ka m na-eche ihe ọma ma na-amụmụ ọnụ ọchị. Nke a na-, n'oge ya, ga-eme ka obi dị ya mma.
Otú ọ dị ihe na-akpali n'ezie ka m bụ na anyị ndị inyom nwere a ikike na-eke ịhụnanya ndọrọ mmekọahụ maka anyị onwe anyị nile site na anyị onwe anyị! Ihe m pụtara site na nke a bụ na mgbe a nwaanyị na-amụta iji dị nnọọ 'na-' na ya rọrọ, nwanyị ume, o nwere ike na-eche ihunanya, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịghị nwoke nọ. Mmetụta a na-nwere ike nweta iji a na-ekpo ọkụ saa, kandụl, na aromatherapy ịhịa aka n'ahụ, ejiji mara mma uwe na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ. Ya mere ka nke a na-eme ka ndị ikom n'ekpere? Emela, ezi ka Kama, M na-atụ aro na mgbe a nwanyị nwere ike nro na ahụmahụ mmetụta ihunanya, a ga-emepe ohere maka ya aka ịghọta ya nwoke mgbe o mere ihe na-agbakwụnye na a mmetụta.
Ọ bụrụ na ị maara m obibia mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ị ga-amarakwa na mụ kwere na oke na nwanyị ume ọrụ n'ime a mmekọrịta, n'ihi a nwanyị nwanyị m na-agaghị na-atụ aro 'na-' ihunanya ihe ya nwoke, Otú ọ dị na-n'ime a ihunanya ohere nke 'mmetụta' na 'ịbụ', na mgbe ahụ na-ekere òkè na ya na ya onye pụrụ ịbụ ndị mara mma. Ọ na-arịọ ndị ha na ya dị mkpa ịdị na oke na-atọ ya nwaanyị site n'ime ihe ya na-eme ka ya obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na nwanyị ahụ, na ị ga-achọ ihe romance na mmekọrịta gị na m ikwu na-agbalị a. Ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ị chọrọ 'merie' nwanyị na ị na-akpa, ma ọ bụ mee ka ahuhu azụ ka mmekọrịta ị bụ ugbu a na, M atụ aro 'na-' ihe ihunanya ya, na ezi mmụọ nke romance n'azụ omume!